Nhema dzeDMP Mukushambadzira | Martech Zone
Dhata Management Mapuratifomu (DMPs) yakauya pachiitiko makore mashoma apfuura uye vanoonekwa nevazhinji semuponesi wekushambadzira. Pano, ivo vanoti, isu tinogona kuve ne "rekodhi yegoridhe" yevatengi vedu. MuDMP, vatengesi vanovimbisa kuti iwe unogona kuunganidza ruzivo rwese rwaunoda rwema 360-degree maonero emutengi.
Dambudziko chete - hachisi chokwadi.
Gartner anotsanangura DMP se
Software inonyudza data kubva kunzvimbo zhinji (senge zvemukati CRM masisitimu uye vekunze vatengesi) uye inoita kuti iwanikwe kune vatengesi kuti vavake zvikamu uye zvinangwa.
Zvinoitika kuti vanoverengeka vevatengesi veDMP vanoumba musimboti we Gartner's Magic Quadrant yeDhijitari Kushambadzira Mahabhu (DMH). VaGartner vanoongorora vanofungidzira pamusoro pemakore mashanu anotevera iyo DMP ichashanduka kuita DMH, ichipa:
Vashambadziri uye zvinoshandiswa zvine yakamisikidzwa kuwana kune vateereri dhata dhata, zvemukati, zvekufambisa basa zvinhu, mameseji uye zvakajairika analytics mashandiro ekurongedza uye nekuvandudza mushandirapamwe wema multichannel, hurukuro, zviitiko uye kuunganidzwa kwedata mumigwagwa yepamhepo neyepamhepo, zvese nemaoko uye zvakarongeka.
Asi maMPM akagadzirwa kare kutenderedza chiteshi chimwe: epamhepo ad netiweki. Pakatanga maMPP pamusika, vakabatsira mawebhusaiti kuendesa zvakanakisa nekushandisa makuki kuteedzera zviitiko zvewebhu zvisinga zivikanwe. Ivo vanobva vaisa mortech sechikamu chehurongwa hwekutenga kwechirongwa, zvichinyanya kubatsira makambani kushambadzira kune imwe mhando yechikamu. Ivo vakanakira ichi chinangwa chimwe chete, asi tanga kukundikana pavanobvunzwa kuti vaite akawanda-chiteshi macampaign anoshandisa muchina kudzidza kune yakanangwa nzira.
Nekuti data rakachengetwa mukati meDMP harizivikanwe, iyo DMP inogona kubatsira kune yakakamurwa kushambadzira pamhepo. Izvo hazvireve hazvo kuti unoda kuziva kuti iwe ndiwe ani anoshandira kumusoro kushambadziro yepamhepo zvichibva pane yako yapfuura webhu yekufambisa nhoroondo. Kunyange chiri chokwadi kuti vashambadziri vanogona kubatanidza yakawanda yekutanga-, yechipiri- uye yechitatu-bato dhata kune makuki akavakirwa muDMP, ingori dura re data uye hapana chimwezve. DMPs haigone kuchengeta yakawanda data sehukama kana Hadoop-based system.
Chinonyanya kukosha, haugone kushandisa DMPs kuchengetedza chero ruzivo rwunozivikanwa (PII) - mamorekuru anobatsira kugadzira iyo yakasarudzika DNA kune yega yevatengi vako. Sawe mushambadzi, kana iwe uri kutsvaga kutora yako yese yekutanga-, yechipiri- uye yechitatu-bato dhata kuti ugadzire sisitimu yekurekodha kumutengi wako, ipapo DMP haingazvidimbure.
Sezvo isu mune ramangwana-chiratidzo chedu tekinoroji kudyara muzera reInternet reZvinhu (IoT), DMP haigone kuenzanisa ne Mutengi Dhata Platform (CDP) yekuzadzisa izvo zvisingawanzo "rekodhi yegoridhe." MaCDP anoita chimwe chinhu chakasarudzika - vanogona kutora, kusanganisa uye kugadzirisa ese marudzi e data revatengi kubatsira kugadzira iyo yakazara mufananidzo (inosanganisira DMP maitiro ehunhu). Nekudaro, kusvika padanho ripi uye kuti izvi zvinoitwa sei zvinosiyana zvakanyanya kubva kumutengesi kuenda kumutengesi.
CDPs dzakagadzirwa kubva pasi kusvika pakubata, kusanganisa uye kugadzirisa ese marudzi eesimba data revatengi, kusanganisira data kubva kunzanga enhau hova uye IoT. Kusvika izvozvi, zvakavakirwa pahukama kana Hadoop-based masystem, zvichivaita zvirinani kubata mafashama e data ari pamberi apo zvimwe zvigadzirwa zveIOT zvinouya online.
Ichi chikonzero nei Scott Brinker achipatsanura maDMP nemaCDP mune ake Kushambadzira Tekinoroji Landscape Supergraphic. Yakashevedzwa mune yake squint-inducing 3,900+ logo chati iri maviri akapatsanurwa zvikamu nevatengi vakasiyana.
Mukunyora kwake achizivisa graphic, Brinker anonongedza nenzira kwayo kuti iyo Platifomu Imwe Yekutonga Ivo Vese zano harina kuzombobudirira, uye zviripo panzvimbo kubhabhatidza pamwechete mapuratifomu kuti uite mamwe mabasa. Vatengesi vanotendeukira kune imwe mhinduro yeemail, imwe yewebhu, imwe yedata uye zvichingodaro.
Zvinodiwa nevashambadzi haisi chikuva chikuru chinozviita zvese, asi chikuva chedata chinovapa ruzivo rwavanoda kuti vatore sarudzo.
Chokwadi ndechekuti, ivo vaviri Brinker naGartner vanobata pane chimwe chinhu chiri kungotanga kubuda: yechokwadi orchestration chikuva. Yakavakwa paCDPs, izvi zvakagadzirirwa kwechokwadi omnichannel kushambadzira, ichipa vashambadzi maturusi avanoda kuita uye kuita sarudzo dzinotungamirwa nedhata munzira dzese.
Sezvo vatengesi vanogadzirira ramangwana, ivo vachazoda kutora sarudzo yekutenga nezve yavo data mapuratifomu nhasi izvo zvinokanganisa mashandisiro avachaita mune ramangwana. Sarudza zvine hungwaru uye uchave nepuratifomu iyo inobatsira kuunza zvese pamwechete. Sarudza zvisina kunaka uye unodzoka pakona imwe mune pfupi nguva.
Tags: brinkercdpCRMMutengi Dhata Platformdhata manejimendi manejimendidigital kushambadzira hubsdmhdmpgartnerkushambadzira tekinoroji nzvimboPlatifomu Imwe Yekutonga Ivo VeseScott brinker
Nyanzvi yemasvomhu uye ane ruzivo rwehunyanzvi, George Corugedo ane makore anopfuura makumi maviri ebhizinesi nehunyanzvi hunyanzvi. Sa Co-muvambi uye CTO ye RedPoint Global, George ane basa rekutungamira kuvandudzwa kweRedPoint manejimendi manejimendi uye mhinduro dzevatengi. Anobata BS uye BA muGeology & Mathematics, zvichiteerana, kubva kuYunivhesiti yeMiami, uye neMS muApplied Mathematics kubva kuYunivhesiti yeArizona.
5 Zvikonzero Vatengesi vari Kuisa Mari Zvakawanda muVatengi Kuvimbika Zvirongwa